I-FLEETGUARD LF3524 isihluzi seoyile / seLube seMITSUBISHI Abenzi beenjini kunye nabathengisi | UHertz
I-FLEETGUARD LF3524 isihluzi seoyile / seLube seNjini yeMITSUBISHI
Ukubaluleka kweoyile yemoto ecocekileyo
Ukucoceka ngeoyile yeemoto kubalulekile kuba ukuba ioyile ishiywe ingacocwanga kangangexesha elithile, inokugcwala ngamasuntswana amancinci, anzima anokufaka umphezulu kwinjini yakho. Leoyile imdaka inokuthi inxibe izinto ezenziwa ngempompo yeoyile kwaye yonakalise iindawo eziphakamileyo kwiinjini.
Inombolo ye-OEM TL1012
Buyisela IINKCUKACHA LF3524
IKOBELCO 2451U311-1A 24514311-1A
IHYUNDAI 26320-41402 KS218-2
Ukusetyenziswa IKOBELCO: SK200LC MD120
Ububanzi Ububanzi bomzimba: 93.4mm Ukuphakama: 98mm Ubungakanani be-Thread: M18 * 1.5
Inkcazo Isihluzi seoyile seLube
Iimbonakalo Isicoci seoyile sinceda ukususa ukungcola kwioyile yeinjini yemoto enokuqokelela ekuhambeni kwexesha njengoko ioyile igcina injini yakho icocekile.
Emva kokuba isihluzi seoyile sisetyenziselwe ixesha elithile, ukungcola okuninzi kuya kuhambelana nezinto zokucoca ulwelo, ke ngoko icebo lokucoca ulwelo kufuneka lithathelwe indawo rhoqo. Ngokubanzi, isihluzi seoyile kunye neoyile kufuneka zitshintshwe ngaxeshanye. Ngale ndlela, kuyanceda ukwandisa ubomi benkonzo ye-injini. Kwiimoto ezisetyenziswa rhoqo, isihluzi seoyile kufuneka sibuyiselwe qho kwiikhilomitha ezingama-7500. Phantsi kweemeko ezinzima, njengokuhamba rhoqo kwiindlela ezinothuli, kufuneka itshintshwe qho kwi-5000 km.
Zisebenza njani izihluzi zeoyile
Ingaphandle lecebo lokucoca ulwelo yitena enesigubungelo sokutywina esivumela ukuba sibambelele ngokuqinileyo ngokuchasene nomphezulu wokukhwelana kwe-injini. Isitya esisezantsi senkonkxa siphethe i-gasket kwaye sigalelwe ngemingxunya ejikeleze indawo engaphakathi kwegasket. Umngxunya ongumbindi usongelwe ukudibana nendibano ye-oyile yeefilitha kwibhlokhi yeenjini. Ngaphakathi kwitoti sisixhobo sokucoca ulwelo, esenziwa rhoqo kwifayibha yokwenziwa. Impompo yeoyile ye-injini ihambisa ioyile ngokuthe ngqo kwisihluzi, apho ingena ivela kwimingxunya kwiperimeter yesitya seplate. Ioyile emdaka iyapasiswa (ityhalelwe phantsi koxinzelelo) ngemithombo yeendaba yokuhluza kwaye ibuye umngxuma ongumbindi, apho iphinde ingene kwi-injini.
Ukukhetha isihluzi seoyile esifanelekileyo
Ukukhetha isihluzi seoyile esifanelekileyo kwisithuthi sakho kubaluleke kakhulu. Uninzi lweefilitha zeoyile zikhangeleka zifana kakhulu, kodwa umahluko omncinci kwimisonto okanye ubungakanani be-gasket unokumisela ukuba ingaba isihluzi esithile siza kusebenza kwisithuthi sakho. Eyona ndlela yokufumanisa ukuba yeyiphi na oyile icebo lokucoca ulwelo ngokujonga incwadi yemiyalezo yomnini wakho okanye ngokubhekisa kwikhathalogu yamalungu. Sebenzisa icebo lokucoca ulwelo elingalunganga kunokubangela i-oyile ukuba ivuze ngaphandle kwe-injini, okanye isihluzi esingafanelekanga sinokuwela nje. Nokuba zezi meko zinokukhokelela kumonakalo omkhulu we-injini.
Izibonelelo zethu zemveliso:
■ Ukusebenza okuphezulu, imithombo yeendaba ene-patent eshukumayo isusa udaka ukukhusela izinto zenjini kunye nokwandisa amathuba enkonzo
■ imidiya yokususa ukungcoliseka okuphezulu kunye nokukwazi ukuhamba kokubandayo, ukuvelisa ubomi obude benjini
■ Injini ifumana ioyile ecocwe ngokucocekileyo ukusuka kwicandelo ledisk elithe nkqo ngqo kumacandelo ayo apho ifuneka khona kakhulu, kunokuba ibuyiselwe kwisampulu yeoyile.
Ukupakisha okungathath'icala, ikhatoni ngaphakathi, ityala leplanga ngaphandle, okanye eyenziwe ngokwezifiso ngokwesicelo.
Egqithileyo Umgangatho we-OEM FLEETGUARD LF3587 Ioyile / iLube yeefilitha ze Injini yedizili
Isihluzi seoyile ye-Injini ye Excavator
Umgangatho we-OEM weFLEETGUARD LF3587 yeoyile / yeLube yokuhluza ...
I-Spin-on kwiCartridge yeefilitha zeoyile yeKomatsu
FLEETGUARD LF3995 Lube lokucoca ulwelo kuba Iinkuphelostencils, tre ...
Injini Lube Icebo lokucoca oyile LF3664